« Cocktail Molotov » tetsy amin’ny 13 mai : Tetika hanosoram-potaka ny mpitondra? -
AccueilRaharaham-pirenena« Cocktail Molotov » tetsy amin’ny 13 mai : Tetika hanosoram-potaka ny mpitondra?
Omaly vao maraim-be dia nisy nitoraka « cocktail Molotov » ny lampihazo tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Olona roa nitaingina moto no fantatra fa nanipy izany, ary tavoahangina labiera niisa enina no natsipy rehefa avy narehitra araka ny fampitam-baovao avy amin’ny mpitandro filaminana. Nisy fahamaizana vokatr’izany ilay lampihazo fanaovan’ireo depiote miisa 73 kabary isanandro, na dia fotoana fohy aza dia voafehy ny afo hoy hatrany ny fampitam-baovao avy amin’ny mpitandro filaminana. Efa mandeha araka izany ny fanadihadiana momba ity raharaha ity amin’izao fotoana izao.
Tsy nahagaga raha toa ka avy hatrany dia niampanga ny fitondrana ankehitriny ireto mpitarika ny fihetsiketsehana etsy amin’ny kianjakan’ny 13 Mai ireto. Efa nangatsiaka tanteraka mantsy ilay hetsika, ka amin’ny alalan’ny teti-dratsy toa itony indray no hisintonana ny olona ho avy eny amin’ny 13 mai. Kapoakan’izy ireo rahateo io manao “victime” io, amin’izay mora mahazo ny fon’ny olona. Hatramin’ny niatombohan’io fitokonana tarihin’izy ireo io mantsy dia tsy nitsahatra nitady izay fomba rehetra ahafahana miampanga ny mpitondra ankehitriny izy ireo. Niainga tamin’ny fihantsiana ireo mpitandro filaminana tamin’ny faha- 21 Aprily lasa teo, nitohy tamin’ny fanaovana amboletra sy fanidiana ireo minisitera maro. Omaly indray izany dia nisy ity fitorahana « cocktail Molotov » ity izay mahalasa ny saina ihany. Ny antony dia mbola tsy maty ao an-tsain’ny vahoaka malagasy ny zava-nitranga teto Antananarivo nandritra ny fanonganam-panjakana nitranga ny taona 2009. Nanapa-kevitra ny nampianatra ny fanamboarana ity “cocktail Molotov » ity mantsy ny mpanentana fandaharana tamin’ny onjam-peon-dRavalomanana tamin’izany fotoana izany. Izy ireo araka izany no matihanina amin’ny fanamboarana itony fitaovana entina mandoro fotodrafitrasa itony. Iza àry no hampangaina ho nahavita ity fanipazana “cocktail Molotov » ity raha hiverenana ny tantara? Manahy mantsy ny maro fa tetika maloto entina hanosoram-potaka ny mpitondra ankehitriny indray izao tranga izao.
Kivy ireo mpitolona
Efa mihena hatrany ankoatra izay ny isan’ireo olona mamonjy ny hetsika tarihin’ireo depiote miisa 73 amin’izao fotoana izao. Ny antony dia mihatonga saina ny ankamaroan’izy ireny fa fihetsika mifono fitadiavan-tseza tsotra izao no ataon’ireto mpitarika azy ireto fa toa tsy misy paikady mazava enti-manarina ny firenena akory. Tsapan’ny rehetra ihany koa fa ny hanangana governamanta iraisana ahafahany mipetraka amin’ny seza haingana no tanjon’ireto depiote ireto fa tsy misy fiovana entin’izy ireo akory. Noho io fahavitsiana io dia tsy maintsy mikaroka izay fomba rehetra hitazonana ireo olona ireo ny depiote mpanohitra, ka manao izao fomba rehetra ahatonga ny olona hitsetra azy ireo. Diso paika anefa ireto depiote raha toa ka ny fanirahana olona hanao fihetsika mamohehitra no heveriny fa hampiverina indray ny olona eny an-kianja. Ny antony dia efa vakiana fotsiny ny finiavan’ireto depioten’ny “fiovana” ireto hanimba tanteraka ny firenena, ka mahatofoka ny olona izay resy lahatra tany am-boalohany. Hany hery dia milaza ny hanao diabe hihazo ny lapam-panjakana Iavoloha indray hono, ary ireo vahoaka no atao lohalaharana amin’izany. Io sisa no fomba hitan’ireto mpanao politika ireto ahafahana miampanga ny Filoham-pirenena ankehitriny. Izany hoe entina eny amin’ny faritra mena indray ireo olona tsy manan-tsiny, ka raha mandray ny andraikiny amin’ny fiarovana izany ireo mpitandro filaminana dia lazaina fa mpamono olona ny mpitondra. Tetika efa fantatry ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy, ka mahatonga azy ireo ho kivy amin’ireto depiote tia seza tafahoatra ireto.